खाडीबाट कामदार ल्याउन सकिँदैन : श्रममन्त्री यादव- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कोभिड–१९ को महामारी खाडी मुलुक र मलेसियामा पनि विस्तार हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा पर्न थालेका छन् । केही संक्रमित भएका छन्, कोही रोजगारी कटौतीमा पर्न थालेका छन् ।
उनीहरूको उद्धार वा राहतका विषयमा नेपालले के गर्दै छ ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवसँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानी :
संक्रमणको जोखिम विस्तार भइरहेको खाडी र मलेसियामा रहेका लाखौं नेपाली कामदारका विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ?
मन्त्रालयले यसबारे काम गरिरहेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र मैले भिडियो कन्फेरेन्स र टेलिफोनमार्फत सम्बन्धित देशका दूतावास, नियोग र तत् देशका सरकारी अधिकारीसँग कुनै नेपालीले दुःख नपाउन् भनेर कुरा गरिरहेका छौं ।
के कुरा भयो ?
दूतावास र नियोगलाई रोजगारी बन्द भएको अवस्थामा कामदारलाई रोजगारदाताले नै खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउने गरी कुरा गर्न निर्देशन दिएका छौं । सम्भव भए तलब पनि दिलाउन भनेका छौं । प्रारम्भिक चरणमा यो काम अघि बढेको छ । श्रमिकहरूलाई पनि दूतावास वा मिसनसँग सम्पर्कमा बस्ने वातावरण बनाएका छौं ।
कुनै कारणले रोजगारदाताले पाल्न सकेनन् र त्यहाँबाट छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने दूतावासले सेल्टर व्यवस्था गरेर नेपाली कामदारलाई खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया थालेका छौं । यसमा दूतावास वा कूटनीतिक मिसनले सकेनन् भने नेपाल सरकारले थप व्यवस्था मिलाउनेछ ।
नेपालभित्रै पनि केही पहल गर्नुभएको छ कि ?
मैले म्यानपावर व्यवसायीलाई बोलाएर कुरा गरेको छु । मेनपावरमार्फत समन्वय गरेर पनि रोजगारदातालाई विश्वासमा लिएर उनीहरूबाट सहयोग लिने कुरा भएको छ । कमसेकम बस्ने र खाने व्यवस्था रोजगारदाताले गर्न सक्छन् ।
साउदी अरबले केही दिनअघि मात्रै कतिपय देशका कामदारलाई चार्टर विमानमार्फत फिर्ता पठायो । त्यहाँ रहेका हाम्रा कामदारको हकमा के होला ?
साउदीले बंगालादेश, पाकिस्तानलाई पत्र नै लेखेर कामदारको व्यवस्थापनबारे कुरा गरेको छ । कतिपय देशमा कामदार फिर्ता पठाउन खोजेको छ । नेपाली कामदारलाई भने उसले अन्यको सूचीमा राखेको छ । त्यसकारण फर्काइहाल्दैन होला ।
साउदी अरबमा संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च तहमा केही कुरा भएको छैन ?
हामीले यही अवस्थामा बाहिर बसेका नेपालीलाई ल्यायौं भने व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । यसो भन्दैमा उता रहेका नेपालीलाई अनादर गरेको होइन । नेपाली जो जहाँ छन्, त्यहीँ सम्मान र सुरक्षासाथ व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ । उनीहरूलाई यता ल्याएर राख्ने कुरामा व्यवस्थापकीय पक्ष जटिल हुन्छ, हामी सम्हाल्न सक्दैनौं ।
खाडी मुलुकमा संक्रमण बढ्दै गयो भने त्यहाँबाट कामदार फिर्ता पठाउने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ विमान आउनै प्रतिबन्ध रहेका अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव होला र । फर्काउनैपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी विकल्प खोजी गर्छौं ।
कतिपय देशमा कामदार भोकै बस्नुपरेको छ । फिलिपिन्सले श्रम गन्तव्य देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई खाना बाँड्न थालिसकेको छ । हाम्रो के तयारी छ ?
सारा दुनियाँले परिकल्पना नगरेको परिस्थिति आइरहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ हिसाबले व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । अहिले हामीलाई देशभित्र भएका क्वारेन्टाइनमा राख्न धौधौ परिरहेका बेला विदेशमा रहेका कामदार ठूलो संख्यामा एकैचोटि आउँदा धेरै गाह्रो हुन्छ । परिआयो भने हाम्रा स्कुलका होस्टलहरूमा बेड छँदै छन् । त्यतापट्टि पनि सोच बनाएका छौं । नेपालीलाई भोकभोकै मर्न दिइने छैन ।
अहिले मन्त्रालयले नेपाली कामदार रहेकामध्ये कुनकुन देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ?
सबैभन्दा बढी प्रभाव साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा देखिएको छ । बहराइनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । कतार र मलेसियामा समस्या चर्किसकेको छैन । हामीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समस्या बुझ्न प्रयोग गरिरहेका छौं ।
समस्या लम्बिँदै गयो भने के गर्ने ?
यस विषयमा सिंगो सरकार नै चिन्तित छ । बरु कोरियाको श्रम स्वीकृति लिएर बसेका दुई सय कामदार त्यहाँ जान तयार छन् । अहिले कोरियामा अवस्था सहज बन्दै गएको छ । त्यसैले हामी त्यहाँ पठाउने वातावरण बनाउँदै छौं ।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ११:०१